WHO Oo Qeylo-dhaan Culus Ka Soo Saartay Cudur Uu Sababo Shucaaca Danabaysan Ee Maayadaha Mobile-ku - Wargane News
Home Somali News WHO Oo Qeylo-dhaan Culus Ka Soo Saartay Cudur Uu Sababo Shucaaca Danabaysan...
Akhri: Warbixin Culus Oo Ay Khubarrada Caafimaadka Ee Hey’adda WHO Kaga Digeen Halista Adeegsiga Mobile-ka Oo Ay Malaayiin Ruux oo Dunida Ku Noolli Wehel U Yihiin
Hey’adda caalamiga ah ee caafimaadka u qaabilsan dunida ee loo yaqaanno WHO (World Health Organization) ayaa ku dhawaaqday natiijada cilmi baadhis ay ku sameeyeen shucaaca ka soo baxa telefoonnada gacanta ee Mobile-ka loo yaqaanno iyo khataro caafimaad oo ay sababaan. Deraasaddan ay WHO soo saartay waxa ay kaga digtay saamayn taban oo shucaaca telefoonka mobile-ku saydhiyo ku yeesho caafimaadka qofka isaga oo mararka qaardkood horseeda cudurro uu kamid yahay Kansarku.
Sida ay WHO sheegtay khubaro caafimaadk oo ka tirsan hay’addooda ayaa dib u eegis ay ku sameeyeen shucaaca maayadaha danabaysan ee khadka isgaadhsiinneed ee Mobilku xambaarsan yahay waxaa ay ku tilmaameen in uu saamayn weyn ku yeesho malaayiin ruux oo kamid ah dadka isticmaalla adeegga isgaadhsiinneed ee telefoonkaasi bixiyo. Warbixintani waxaa ay hoosta ka xariiqday in shucaacaasi uu fursad u siinnayo cudurrada uu Cansarku ka mid yahay in uu qofku musharrax u noqdo iyadoo maayadahaasi ay unugyada difaaca jidka isugu lammaan WBC RBC (White Blood Cells iyo Rd Blood Cells) ay daciifiyaan, taasina horseed u noqoto in uu qofku halis u noqdo jeermisyada cudurkan.
Khatarta ay ka digtay WHO ee dhinaca telefoonka gacanta ayaa la barbar dhigay halista curiyaha kiimikaad ee laydhka oo isagu la bah ah curiyaha Kaarboonka loo yaqaan. Si kale haddii loo dhigo waxaa shucaaca telefoonkani la mid yahay bay tidhi hay’addo khatarta habdhiska neefsiga [resparitory system] kala kulmo qiiqa culus ee ay sii daayaan burm-madda mishiinnada baabuurtu ee Exhust-ka loo yaqaannaa.
Natiijada deraasaddan ayaa inkastoo ay tilmaamtay inaan laga maarmi karin adeegsiga telefoonka, haddana waxaa ay khubarrada WHO ku taliyeen in marka qofku ku hadlayo Mobilka ay dhegta iyo madaxa ka fogeeyaan ama ay isticmaallaan sameecadaha dhegaha [head phones] loo yaqaanno.